Ngaba kunomdla ukuthenga isiphelo esiphezulu se-Android kwiminyaka emibini edlulileyo? | I-Androidsis
Xa kufika ixesha lokujonga ifowuni entsha ye-Android, kukho izinto ezininzi ekufuneka zithathelwe ingqalelo ukuze uthenge ngokufanelekileyo, njengoko besesikuxelele ngemini yayo. Njengokuqiqa, Sijonge i-smartphone esemgangathweni ngexabiso elifanelekileyo. Kungenxa yoko le nto abasebenzisi abaninzi bejonga kwiimodeli zokugqibela eziphezulu ezikhutshwe kunyaka okanye emibini edlulileyo.
Into eqhelekileyo yile Le Android iphela ephezulu yehla ngexabiso njengoko ixesha lihamba. Ngesi sizathu, ifowuni ephezulu eyaqaliswa kunyaka okanye emibini edlulileyo, ihlala inexabiso elinomdla. Nangona abasebenzisi abaninzi benombuzo wokuba kufanelekile na ukuthenga le modeli.
Kuya kufuneka uhlale uyikhumbula loo nto Sibona indlela amabala akwi-Android aphucula ngayo kakhulu. Uluhlu oluphakathi lukhule kwaye luphuculwe kakhulu kulo nyaka. Ukongeza, sikwanecandelo elitsha lepremiyamu yaphakathi, ngeemodeli ezinjengeNokia 8.1 ifikile kutshanje.
Uluvo lwezi modeli Iiprosesa ezinje ngeSpapdragon 710 okanye iSnapdragon 670, kukusinika intsebenzo elungileyo, efanayo naleyo yefowuni ngaphakathi kwesiphelo se-Android, kodwa ngexabiso eliphantsi. Kodwa, xa kufikwa kwisiphelo esiphezulu esele sinonyaka okanye emibini ubudala, ixabiso liyafana kakhulu. Into evelisa amathandabuzo phakathi kwabasebenzisi xa bekhetha ifowuni. Ngaba enye yezi modeli ziphakamileyo kufanelekile?
1 Thenga isiphelo esiphezulu
2 I-Premium mid-range njengesisombululo
Thenga isiphelo esiphezulu
Ifowuni ephezulu yokuphela konyaka okanye emibini edlulileyo, iya kuqhubeka nokugcina umgangatho wayo. Yinto ephezulu yoluhlu, eneenkcukacha ezifanelekileyo. Ingxaki asikukuba umgangatho wale fowuni ze-Android uza kusokola. Baza kuqhubeka ukuba yimodeli enamandla kunye nomgangatho. Ziimodeli ezenzelwe ukuhlala iminyaka.
Uyilo lunokuba yinto eguqukayo ngokukhawuleza okukhulu, njengoko sibona namhlanje. Ngale ndlela, uya kuqaphela ukuba kukho iimodeli ezikhawuleza ziphelelwe lixesha. Kungenxa yokuba uyilo oluphezulu kwi-Android luhlala luvela. Kwinqanaba lobugcisa, bagcina umgangatho, nangona imisebenzi emitsha ihlala ingeniswa kubo.
Ke ukuthengwa ngale ndlela akunakubangela ingxaki kubasebenzisi. Ngenxa yokuba uza kuthatha ifowuni yokuqala, ngexabiso elifanelekileyo. Kodwa inye into ekufuneka siyithathele ingqalelo, engaphaya kwamandla abenzi bezi fowuni ze-Android. Sithetha ntoni? Sithetha ngohlaziyo.
Ikhalenda yangoku yohlaziyo kwi-Android inobunzima, ukongeza kubangela ukungonwabi phakathi kwabasebenzisi. Into eqhelekileyo kukuba imodeli ngaphakathi kuluhlu oluphezulu Ndizakufumana iminyaka emibini yohlaziyo, ubukhulu becala, kwiimeko ezininzi. Oku kuthetha ukuba xa uyokuyithenga, unokufumana enye okanye ungabi sahlaziya. Ukwenza isoftware yefowuni iphelelwe lixesha.
Le yeyona ngxaki iphambili abajongana nayo abasebenzisi ukuba bacinga ngokuthenga isiphelo esinonyaka omnye okanye emibini ubudala. Ke ngale ndlela, iba yinto enengxaki yokuthenga. Ngenxa yokuba ufuna ukufumana uhlaziyo kunye nokufikelela kubo. Into enokuthi xa uthenga enye yezi modeli ingenzeki.
I-Premium mid-range njengesisombululo
Ke ngoko unokuyifumana umdla ngakumbi ukuthenga ezinye zeemodeli ngaphakathi kwepremiyamu yaphakathi yangoku kwi Android. Kukho ukhetho olukhulu lweemodeli ezikolu luhlu, ezinokuba ngumdla. Banokubalula okuhle, phantse ekuphakameni kwesiphelo esiphakamileyo.
Kwakhona, ngokwexabiso, zikuluhlu lwamaxabiso afanayo ungabhatala isiphelo esiphezulu se-Android kwiminyaka emibini edlulileyo. Kodwa kule meko uyazi ukuba uza kufumana uhlaziyo, ke ihlala ingaphezulu kakhulu ngoku ngalo lonke ixesha. Ke ngaphandle kwamathandabuzo, kunokuba kufanelekile ukuba ucinge ngayo kwaye ujonge olu khetho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Ngaba kufanelekile ukuthenga i-Android ephezulu ekupheleni kweminyaka emibini edlulileyo?
Inguqulelo entsha yeBixby ibangela iingxaki kwi-Galaxy S9